Kaominina Tanjombato: nampikorontana ny mponina ny fiovaovan’ny vidin-drano | NewsMada
Kaominina Tanjombato: nampikorontana ny mponina ny fiovaovan’ny vidin-drano
Ny andron’ny talata 24 marsa lasa teo, nidina ho 20 Ar ny saran’ny rano eran’ny daba mavo 50 litatra sy ny siny 20 litatra, manerana ny paompy rehetra ao Tanjombato. Fanapahan-kevitra noraisin’ny kaominina Tanjombato hitsinjovana sy hanamaivana ny fahasahiran’ny vahoaka amin’izao fiadiana amin’ny areti-mandoza Coronavirus izao izany. Nahafaly sy nahafa-po ireo mponina ity fanapahan-kevitra ity. Marihina fa misy karazany roa ny famatsian-drano eo anivon’ny kaominina: ny iray, an’ny kaominina manokana; ny iray kosa, niarahana nanangana amin’ny fikambanana iray.
Omaly kosa anefa, hatairana indray ny an’ny mpantsaka rano raha nilaza ny mpiandry paompy fa niverina ho 50 Ar indray ny vidin-drano ho an’ireo paompy niarahana nanangana amin’ilay fikambanana. Betsaka ny tsy nino ary tao mihitsy ireo nilaza hoe:”aza sangisangina toy izany ny fiainanay”. Niteraka korontana teo amin’ny mponin’i Tanjombato, araka izany, ity trangan-javatra ity.
Raha ny hita teny an-toerana, tonga teny amin’ny kaominina ilay fikambanana nanangana ireo paompin-drano ireo ka nangataka ny hamerenana ny vidin-drano ho 50 Ar. Antony, nahazo filazana avy amin’ny Jirama izy ireo fa tsy miova ny faktiora fa izay naloa hatramin’izay no tsy maintsy efaina. Rehefa nanontaniana ny ben’ny Tanànan’ny kaominina Tanjombato, nanamarina fa nisy tokoa ny fihaonana amin’ireo solontenan’ny fikambanana ireo ka teboka roa nous nivoitra nandritra ny fihaonana. Voalohany, tapaka fa hijanona ho 20 Ar ny vidin-drano ho an’ireo paompin’ny kaominina. Faharoa, nangataka ny kaominina mba hahena kely kosa ny vidin’izany ho an’ireo paompy natsangan’ilay fikambanana.